Trump Cripples WTO as Trade War Rages | Myanmar Business Today
HomeBusinessInternationalTrump Cripples WTO as Trade War Rages
Ana Swanson(New York Times)
The U.S. has spent two years chipping away at the World Trade Organization, criticizing it as unfair, starving it of personnel and disregarding its authority, as President Donald Trump seeks to upend the global trade system.
The Trump administration is expected to go one step further and effectively destroy the organization’s system for enforcing its rules — even as Trump’s widening trade war has thrown global commerce into disarray.
Over the past two years, Washington has blocked the WTO from appointing new members toacrucial panel that hears appeals in trade disputes. At the beginning of last week, only three members were left on the seven-member body, the minimum needed to hearacase. Two of the last three members’ terms expired December 10. With the administration blocking any new replacements, there will be no official resolution for many international trade disputes.
China’s entry into the organization — 18 years ago on Dec. 11, 2001 — put further stress on the system. The addition of China’s more than 1 billion people to the global marketplace createdahuge opportunity for companies andashock for workers in the United States and elsewhere who were forced to compete.
“We never won with the WTO, or essentially never won,” Trump said October 16 as he met with the Italian president. “And now we’re winningalot. We’re winningalot because they know if we’re not treated fairly, we’re leaving.”
Robert Lighthizer, the U.S. trade representative, has argued that the body’s decisions constrain America’s ability to protect its workers and has insisted it be overhauled.
But Ujal Singh Bhatia, one of the appellate body members whose term ended last Tuesday, said that by making the dispute settlement system potentially non-functional, the United States’ moves had cast doubts on the effectiveness of the organization overall.
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးမှာ တရားမျှတမှုမရှိဟု ဝေဖန်ကာ လူအားဖြင့်လည်း မပူးပေါင်းသကဲ့သို့ အဖွဲ့ကြီး၏ အခွင့်အာဏာကိုလည်း မသိကျိုးကျွံပြုလျက် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့နင့် နှစ်နှစ်ကြာမှခပ်ခွာခွာ ရပတည်ခဲ့သည်။
ထရမ့်အစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် သမ္မတ Trump က ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကို ပိုမို ချဲ့ထွင်ရန် ဆောင်ရွက်နေမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးဖရိုဖရဲ ဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ စနစ်ကို ဖျက်ဆီးရန် နောက်တစ်ဆင့် တိုးဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားတွင် ရှိနေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်းတွင် အမေရိကန်အစိုးရသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့အနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး အငြင်းပွားမှုများကို ကြားနာဆောင်ရွက်ပေးသည့် အဖွဲ့တွင် အရေးကြီး အဖွဲ့ဝင်တစ်ခု ထပ်မံ ခန့်ထားနိုင်ခြင်းမရှိအောင် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အစပိုင်းတွင် အမှုတစ်ခုကို ကြားနာရန်အတွက် အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့် ပမာဏဖြစ်သော ခုနစ်ဦးပါ အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးသာရှိတော့သည်။ အဆိုပါ သုံးဦးအနက် နှစ်ဦး၏ သက်တမ်းမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်မည်ဖြစ်သည်။ အသစ်အစားထိုး ခန့်အပ်မှုအားလုံးကို အမေရိကန်အစိုးရက လိုက်လံ ပိတ်ပင်နေရာ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေး အငြင်းပွားမှုများအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ တရားဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။
ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းပေးမည့် တရားသူကြီးမရှိတော့ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းသည့် လုပ်ငန်းစဥ်အား အပြန်အလှန် သွင်းကုန်အခွန်များ ချမှတ်ကောက်ခံသည့် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲများသို့ သွားတော့မည့် အနေအထားရျိနေသည်။
ထို့အပြင် ကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းရာတွင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့် သက်တမ်း ၂၄နှစ်သား ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီး အဆုံးသတ်တော့မည်ကို အချက်ပြနေသည့်သဘောည်း ဖြစ်နေသည်။
“ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာ အဖွဲ့တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ အနက်ရှိုင်းဆုံး အကြပ်အတည်းကို ရင်ဆိုင်နေရတယ်” ဟု ဥရောပ ကုန်သွယ်ရေး ကော်မရှင်နာမင်းကြီး Phil Hogan က ဥရောပသမဂ္ဂ ပါလီမန်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးကို စီမံနေသည့် စည်းမျဥ်းများကို ကျင့်သုံးအသက်ဝင်အောင် မလုပ်နိုင်လျှင် “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တောရိုင်းဥပဒေပဲ ရှိတော့မယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ Trumpကတော့ အသာစီးပိုရသော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုများ ရရှိအောင် အမေရိက၏ စီးပွားရေးအင်အားဖြင့် ဖိအားပေးလျက် အဆိုပါ အနေအထားမျိုးကို ဖန်တီးလက်ခံထားပြီး ဖြစ်သည်။ ကနေဒါ၊ ဥရောပနှင့် ဂျပန်တို့ကဲ့သို့သော မဟာမိတ်များ၏ သတ္တုတင်ပို့မှုများအပေါ် သွင်းကုန်အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ တရုတ်ကုန်စည်များအပေါ် အခွန်များ အများအပြားချမှတ်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ World Trade Organization (WTO) ၏ စည်းမျဥ်းများကို ချိုးဖောင် ကျော်လွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်သမ္မတနှင့် သူ၏ ထိပ်ပိုင်းအကြံပေးများကတော့ WTOမှာ ‘America First’ ဟူသော Trump ၏ ကတိအတွက် အဟန့်အတား တစ်ရပ်အဖြစ် မြင်သည်။ အဖွဲံဝင်များအားလုံး တူညီသော အခွင့်အရေးရရှိရမည်၊ တန်းတူညီမျှရျိရမည်ဟု ဆိုးထားသော ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့သည် အမေရကိန်အနေဖြင့် မိမိ၏ နိုင်ငံသား အလုပ်သမားများကို မကာကွယ်နိုင်အောင်၊ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးအင်အား အကြီးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဖြင့် လွှမ်းမိုးခွင့်မရအောင် လုပ်နေသည်ဟု ပြောကြသည်။ ထို့အပြင်လည်း ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တရားမျှတမှုမရှိသော ကုန်သွယ်ရေး ကျင့်သုံးမှုများအပေါ် တစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရျိသော်လည်း တရုတ်ကို ကာကွယ်ပေးနေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာလည်း ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပြီးနောက်တွင် တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာခဲ့သည်။
WTO ၏ တရုတ်နိုင်ငံကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်းမှာ အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲ ဆင်နွှဲနေရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ် သမ္မတအကြံပေးများက ဆိုကြသည်။
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်များကို တံခါးဖွင့်ရန်၊ ကုန်သွယ်ရေးကို စီမံခန့်ခွဲစည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန်၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအရာရှိများက လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုက စတင် ထူထောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်များအနက် တစ်ခုမှာ ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုများ ရေးဆွဲပေးရန်၊ အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
သို့သော် WTO အနေဖြင့် အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယတို့ကဲ့သို့သော ပြဒါးတစ်လမ်း၊ သံတစ်လမ်း အဖွဲ့ဝင်များားအကြား အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းရန် သဘောတူညီမှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ပင် ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များ ရေးဆွဲရာတွင် မျှော်မှန်းထားသ‌လောက်ထိရောက်ခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
SourceAna Swanson(New York Times)
Previous articleLululemon’s New Product Investments Hit Profit Forecast
Next articleFounder of South Korea’s Daewoo,aSymbol of Its Rise and Fall, Dies